Ahoana no hametrahana an'i Amazona amin'ny teny fanalahidy manan-danja?
Raha te-hahalala ny fomba amam-panaovana an'i Amazona ianao amin'ny teny fototra manan-danja anao - dia efa any amin'ny toerana mety ianao. Fantatrao ve fa ny pejy voalohany amin'ny valin'ny fikarohana amin'ny Amazon dia mahazo mihoatra ny 60% amin'ny fikarohana fitadiavana fikarohana avy amin'ny mpividy mivarotra mitady ireo entana amidy any? Noho izany dia midika izany fa ny akaiky anao indrindra eo amin'ny ambaran'ny vokatra amazonin'ny Amazon amin'ny teny fanalahidy tianao sy ny andian-teny lava be dia be - ny mety hahalalanao ny varotra mety ho azonao avy amin'ny. Fa ny fomba hananganana an'i Amazona ho an'ny teny fanalahidy manan-danja, indrindra raha mbola mpivarotra vao manomboka fotsiny ianao maka ny dingana voalohan'ny voalohany ao amin'io tsena tena feno olona io? Ny valiny fohy dia ny fahatakarana ny teny fototra sy ny toetrany manokana hita amin'ny fomba fijerin'ny algorithm. Koa, etsy ambany dia hasehoko anao ny fomba hananganana an'i Amazona - amin'ny famoahana torolalana fohy momba ireo teny fototra fototra ary ny fomba tsara hamantarana azy ireo any - windows asp net hosting.
Ahoana no hametrahana an'i Amazonia amin'ny adiresy manan-danja indrindra
Alohan'ny zavatra hafa, alefaso amin'ny fikarakarana ny fikarohana teny malaza Amazon ny làlana marina. Tadidio fa izy no mahatonga ny fototra fototra ho an'ny toerana misy anao eo amin'ny Amazon. Ireto misy fepetra sy famaritana fototra ho anao hahatakatra ny fomba hananganana an'i Amazona amin'ny tenimiafinao fototra. Ataovy azo antoka fa ho azonao avokoa izy rehetra:
Keywords - Ny teny fototra Amazon, amin'ny fomba fijery ny SEO sy ny varotra ecommerce maoderina, dia ny "fehin-tseza" mamintina ny toetra fototra amin'ny fananana na ny fifandraisana ankapobeny amin'ny sokajin'ny vokatra. Ny teny fanalahidy manan-danja dia ampahany manan-danja amin'ny lisitry ny fanamafisana ny vokatra ao amin'ny Amazon amin'ny fikarohana.
Teny ela - Mijoroa amin'ny fehezanteny manokana na fitenenan-teny fototra izay mety hoeritreretin'ireo mpividy mivantana amin'ny fikaroham-pikarohana ao amin'ny Amazon. Raha tsorina, ny teny malaza amin'ny ambaran'i Amazon dia fampiasana ny teny fanalahidy mahazatra ampiasain'ny fikarohana indrindra amin'ny ankapobeny. Raha ny marina, indrindra ity karazan-teny manan-danja ity dia miteraka zavatra manodidina ny 70% amin'ny fikarohan'ny vokatra nataon'ireo mpivarotra velona any.
Izany no antony fa mbola zava-dehibe kokoa ny mamantatra ny tsikombakomba fitadiavana farany mifandraika amin'ny entana amidy na ny sokajin'ny vokatra. Amin'izany fomba izany, dia hanana safidy tsaratsara kokoa ianao amin'ny fampisehoana ny mpividy amin'ny fividianana ny vokatra atolotra anao any. Ankoatr'ireo hafa, manoro hevitra aho amin'ny fampiasana fitaovana fikarohana sokajy manaraka, manokana ho an'ny sehatra ecommerce.
Teny mpihira - fitaovana fanombohana tsara hanaovana fanandramana haingana amin'ny teny Amazon amin'ny alàlan'ny fanampiana amin'ny soso-kevitra sasantsasany manan-danja, izay nalaina mivantana avy amina tanjona ambony indrindra Ny mpivarotra ao amin'ny orinasa na ny orinasa vokatrao.
Scout Jungle - fivarotana tokotokony ho an'ny mpandraharaha amin'ny aterineto mivarotra amin'ny Amazon. Ankoatra ny angon-drakitra tena mahasoa azy, ny Jungle Scout dia tena nanampy tokoa rehefa tonga amin'ny fisavana vaovao momba ny vokatra vaovao, na ny ilàna ny hahazoana tsangambatom-pahaizana manan-danja amin'ny fifaninanana - na amin'ny vokatra azo tsinontsinoavina, fanangonana ilaina mba handraisana.